Sịlịnda Screen Printing Machines
Ọkara Auto Screen Printing Machine
Hot zọ Machine
Full Auto Hot zọ Machine
Ọkara Auto Hot zọ Machine
Na mpe mpe akwa Printing Machine
ụlọ ọrụ Dynamics
Site Wikipedia, na free akwụkwọ nkà ihe ọmụma
Ọ bụghị ka e mgbagwoju anya na-ebipụta na ihuenyo.
Screen ebi akwụkwọ bụ a na-ebi akwụkwọ na Usoro adịru a ntupu na-eji nyefee ink jidesie a mkpụrụ, ma e wezụga na ebe mere impermeable na ink site a igbochi stencil. A agụba ma ọ bụ squeegee na-akpali gafee ihuenyo jupụta oghe ntupu apertures na ink, na a reverse ọrịa strok mgbe na-akpata na ihuenyo na-emetụ mkpụrụ nwa oge tinyere a akara nke kọntaktị. Nke a na-eme ink na mmiri na mkpụrụ na a ga-wetara nke ntupu apertures dị ka ihuenyo esite azụ mgbe agụba mechaa.
Screen ebi akwụkwọ bụkwa a stencil usoro ebipụta Ndinam na nke a imewe na machibidoro a na ihuenyo nke polyester ma ọ bụ ndị ọzọ mma ntupu, na oghere ebe ntekwasa na ihe impermeable umi. Ink na-amanye n'ime ndị ntupu oghere site rijuru afọ agụba ma ọ bụ squeegee na site wetting na mkpụrụ, bufee na na-ebi akwụkwọ n'elu n'oge squeegee ọrịa strok. Dị ka ihuenyo rebounds n'ebe mkpụrụ na ink na-anọgide na mkpụrụ. Ọ na-amara dị ka silk ihuenyo, ihuenyo, serigraphy, na serigraph obibi akwụkwọ. One na agba na-e biri ebi na a oge, ya mere, ọtụtụ meziri nwere ike iji na-emepụta a multicolored oyiyi ma ọ bụ imewe.
E nwere dị iche okwu-eji na ihe bụ nnoo otu Usoro. Omenala na usoro a na-akpọ na ihuenyo-ebi akwụkwọ ma ọ bụ silkscreen ebi akwụkwọ n'ihi na silk e ji usoro tupu mepụtara nke polyester ntupu. Ugbu a, sịntetik eri ọtụtụ ndị na-eji na ihuenyo-ebi akwụkwọ usoro. The kasị ewu ewu na ntupu n'ozuzu oji a mere nke polyester. E nwere ihe pụrụ iche na-eji ntupu ihe nke naịlọn na igwe anaghị agba nchara dị ka ihuenyo ngwa nbipute. E nwekwara dị iche iche nke ntupu size nke ga-ekpebi ihe ga-esi na-ele anya nke okokụre imewe na ihe onwunwe.
N'ihi na ihe banyere ihuenyo ebi akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, biko gaa https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing
Post oge: Ka-27-2018